Gurigii Culusoow oo la Siyaaranayo – Allpunttland.com
HomeFaalloWararGurigii Culusoow oo la Siyaaranayo Gurigii Culusoow oo la Siyaaranayo	Faallo
Warar allpunttlandMarch 30, 2013No Commentshiiraan	Caasimada Gobolka Hiiraan ee Beledweyne, oo ah magaaladii uu ku dhashay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Culusoow iyo in badan oo ka mid ah Dawladiisa ayaa noqotay magaalada labaad, marka laga tago Muqdisho oo hesha deeqaha caalamku Soomaaliya ugu deeqo. Waanna Saldhiga Xarunta Ciidamada kaligii taliyaha Cumar Geele.
10kii Wasiir ee Dawlada Xasan Culusoow, inta isaga la socota oo joogta Imaaraadka iyo labo wasiir oo la socda RW Soomaaliya Saacid (Kalkaaliye) oo ku sugan Jowhar maahee intii kale waxay ku sugan yihiin magaalada Baladweyn oo ah xaruntii uu ku dhashay madaxweyne xasan Culusoow.
Wasiirkii adeega Bulshada Maryam Qaasim ayaa ka mid ah wasiirada badan oo ku sugan Baladweyn. Wasiirada muddadii ey joogtey Wasaarada waxay Mashaariic Iyo Deeqo Waxbarasho ka hirgalisey Gobolka Banaadir, Maalintii ey Bishu aheyd aheyd 28.3.2012. Waxa ey Wasiiradu dhagax dhigtey Sadex School, oo ay bixisey Jaamacada Carabta uguna deeqdey Dalka Soomaaliya.
Waxa kale oo ku sugan wasiirka Khayraadka oo ka soo jeeda magaaladaas abtina u ah Madaxweynaha Soomaaliya
Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa Boqolkiiba sagaashan waxa laga soo magcaabay inta u dhaxaysa gobolka galguduud iyo Bay.
Related Posts	Beledweyne: Maleeshiyo Beeleed oo Shalay Dagaalamay oo Weli is-horfadhiya
December 14, 2015No Comments	Madaxweyne Xasan Sheekh oo Maanta Tegay Magaalada Beledweyne
December 21, 2015No Comments	Websideka Ay beesha darood ad u daawato ha joojiyaan daawashadiisa wuxuu ku shaqeeyo waad aragteen
June 10, 2013No Comments	Baladweyn Guddoomiyaha gobolka Hiraan Cabdi Fitaax Xasan Afrax ayaa edeen dusha usaray hay’adda MSF waxana uu sheegay in ay MSF gobolka shaqadiisi joojisay xli ay jireen dhibaatoyin farababadan oo loqabay caafimadka.dhagayso
March 27, 2013No Comments	Previous PostNext Post About The Author